Daily Sports Korea ဟာ နှစ်စဉ် တောင်ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ အချမ်းသာဆုံးနှင့် နာမည်အကြီးဆုံးအနုပညာရှင် (၁၀) ကို ထုတ်ပြန်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာလဲ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မြို့ (၁၇) မြို့မှာရှိတဲ့ အသက် ၁၈နှစ်ကနေ အသက် ၆၉ နှစ်အကြားတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေဆီကနေ စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်စစ်တမ်းတွေအရ ဒီနေရာမှာ တောင်ကိုရီးယာနိုင်ငံရဲ့ အချစ်အခံရဆုံး အနုပညာရှင် (၁၀) ဦးကို မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁။ Yoo Jae Seok
ကိုရီးယားရဲ့ ဘုရင်ကတော့ Yoo Jae Suk ကလွဲပြီး ဘယ်သူရှိဦးမှာလဲ? Yoo Jae Suk ဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့ အလွန်ချစ်မြတ်နိုးမှုကြောင့် ဒီဆုကို သုံးနှစ်ဆက်တိုက်ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
အာ….တော်တော်လေးထိုက်တန်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဒီနှစ်ရဲ့ နှလုံးသားတွေအားလုံးနှင့် Charts တွေအားလုံးကို အပိုင်သိမ်းထားသူတွေပါ။
K-Pop လောကရဲ့ ဩဇာအာဏာအရှိဆုံးဘုရင်မတစ်ပါးက ဒီနေရာမှာ ရှိနေတာ မထူးဆန်းတော့ပါဘူး။
၄။ Na Hoon Ah
သူကတော့ ၁၉၆၆ ခုနှစ်မှာ ပွဲဦးထွက်ခဲ့တဲ့ Trot အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ Gong Yoo
ဝါး…လူတိုင်းရဲ့ စကြာဝဠာ ahjussi ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဖယောင်းတိုင်မှုတ်လိုက်ရင် တကယ်ပဲ သူကျွန်မတို့ဆီကို လာမှာလား??
၆။ Park Bo Gum
လက်ရှိမှာတော့ ရေတပ်မှာ နိုင်ငံတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေပေမယ့်လည်း သူ့အတွက် မေ့ချန်ထားခဲ့လို့မဖြစ်ပါဘူး။
၇။ Kim Hye Soo
တောင်ကိုရီးယားရဲ့ အချစ်ခံရဆုံးမိန်းကလေးတစ်ဦးက Kim Hye Soo ပါ။
၈။ Hyun Bin
သူကတော့ ကျွန်မတို့ရဲ့ နှလုံးသားထဲကို လေထီးမလိုဘဲ ဆင်းသက်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသားပါ။
၉။ Suzy၊ Lee Hyori နှင့် Lim Youngwoong
ဒီသုံးယောက်က နံပါတ် (၉) နေရာမှာ ပူးတွဲရှိနေသူတွေပါ။
၁၀။ Choi Bul Am, Kim Hee Seon, Kang Ho Dong, Ahn Seong Gi နှင့် Jun Ji Hyun
ဒီသရုပ်ဆောင်တွေနှင့် မင်းသမီးတွေအားလုံးက နံပါတ် (၁၀) နေရာမှာ အတူတူရှိနေကြပါတယ်။
ဒီနှစ်စာရင်းမှာရော သင့်ရဲ့ မင်းသား(သို့) မင်းသမီးလေးတွေ ပါသေးလားဆိုတာ Comment မှာ ပြောခဲ့ပါဦးနော်။